Motherboard tsara indrindra ho an'ny Ryzen 5 3600 - Buying Guide (2020) - Pc
Motherboard tsara indrindra ho an'ny Ryzen 5 3600 - Buying Guide (2020)
Ny fanavaozana 9.1 avy amin'ny PUBG dia vao avy natomboka ary ny olon-drehetra mitaraina noho izany.Toy izany koa, raha milalao Call of Duty ho avy ianao, dia mila maodely farafaharatsiny AMD Ryzen R5 1600X na ambony. Azo antoka fa tsy hanome anao ny takelaka takiana isan-tsegondra izy io. Raha mandinika fanavaozana ny Ryzen 5 3600 ianao, dia ilaina koa ny motherboard mpanohana.
Ny motherboard mifanaraka aminao dia ahafahanao mahazo fanavaozana amin'ny sary, RAM ary koa HDD. Amin'izany dia tsy vitan'ny hoe milalao ady maoderina ianao fa lalao mahagaga maro ihany koa.
Torolàlana momba ny fividianana motherboard bebe kokoa:
Motherboard X570 tsara indrindra
Motherboard Z390 tsara indrindra
Ahoana ny fomba hisafidianana ny motherboard tsara indrindra ho an'ny AMD Ryzen 5?
1. Karatra sary
Na dia misy safidy roa aza ny motherboard ho an'ny karatra sary ivelany, dia tokony hanana karatra anatiny ihany koa izy io. Raha mandinika ny sary AMD, Radeon ianao, dia alao antoka fa mahazo miditra tanteraka amin'ny karatra saryo ny fitaovana nofidianao. Azonao atao ny mitady safidy sasany toy ny hafainganan'ny famantaranandro sy ny hafa hahafantatra bebe kokoa momba an'io. Ny fanaovana azy mifanaraka amin'ny karatra sary dia tokony ho lohalaharana.
Ny zava-dehibe iray hafa tokony hodinihina dia ny endrika endrika isehoan'ny motherboard tianao. Izy ireo dia afaka tonga amin'ny habe sy endrika samihafa. Fa zava-dehibe ny fandrefesana ny haben'ny kabinetranao sy ny habakao. Raha somary kely ny motherboard anao dia tsy ho tafiditra ao anaty kabine izany. Vokatr'izany dia tsy maintsy hamarininao fa ny refy dia tsy kely noho ny karazana eATX motherboard.
Vitsy dia vitsy ny olona mihevitra ny PCI Slots ho safidy lehibe tokony eritreretina. Rehefa mividy motherboard ianao dia azonao atao ny manavao azy taona vitsy taty aoriana. Mety ho zava-dehibe ihany koa ny fanatsarana ny fitaovana sasany toy ny karatra RAM na fanitarana. Ny fananana slot PCI ambony kokoa dia ahafahanao mametraka singa hardware bebe kokoa ao anatin'ny kabinetranao. Hamarino tsara fa manana farafahakeliny farafahakeliny feno kard PCI misy izany.
4. Karazana socket
Tahaka ny slot PCI, ny socket misy motherboard dia zava-dehibe iray hafa tokony hodinihina rehefa mampiasa. Zava-dehibe iray ny mandinika ny karazana socket mety rehefa misafidy motherboard ianao. Tokony hisy takelaka iray izay mifanaraka amin'ny CPU-nao. Tokony hifanaraka amin'ny motherboard anao koa io. Alohan'ny handehananao mividy ny motherboard anao dia alao antoka fa marina ny karazana socket. Amin'ny ankapobeny, ny faladia AM4 dia hanampy.
Safidy fanitarana 5.Motherboard
Antony lehibe iray hafa mila dinihinao ny fanitarana azy. Mazava ho azy fa tsy hividy motherboard fotsiny ianao ary hampiasa azy io hatrany. Hanampy fanitarana fitaovana maro ianao izay misy sary, ary fiasa hafa. Zava-dehibe ny fitazonana toerana ho an'ireo fanitarana rehetra amin'ny vokatrao. Ny fahazoana motherboard misy ny slot PCIe 4 mahazatra dia mety ho fanavaozana lehibe.
Motherboard tsara indrindra ho an'i Ryzen 5 3600:
Asus dia namokatra motherboard mahazatra azo antoka ary azo antoka, B450-F dia iray tamin'izy ireo. Ity vokatra mahavariana ity dia miaraka amin'ny fifanarahana mora foana ho an'ny taranaka rehetra an'ny processeur Ryzen. Mazava ho azy, raha vonona ny hilalao kilalao avo lenta miaraka amin'ny endri-tsoratra tianao ianao, vokatra mahavariana ity azo isafidianana.
Ny safidin'ny fifandraisana mahavariana toa ny dual M.2 sy USB 3.1 dia zavatra iray tianao ho an'ity vokatra ity. Ny fampiasana mpampifandray roa M.2 sy Gen 2 Type-A dia hanome valiny tsara kokoa ho anao. Ny zava-bitan'ity motherboard ity dia tsara foana ary ny ankamaroan'ny mpividy dia tia ny fomba filalaovany amin'ny CS: GO sy PUBG. Te hanana an'ity vokatra ity ianao amin'ny fampiasana mahazatra anao.
Fa maninona no Unique?
AMD B450 Chipset no mpanohana lozisialy farany azo raisina miaraka amin'ity vokatra ity. Ity fitaovana mahavariana ity dia miaraka amin'ny fomba fijery cyber izay mahatalanjona ny mijery ny ampinga ROG I / O izay vita amin'ny famaranana mainty matevina matte. Mazava ho azy fa misy mpilalao matihanina matihanina rehetra te-hilalao an'ity toa ny zandriko lahy.
Izaho manokana dia tiako ny hitazona ny ASUS B450-F ao amin'ny PC-ko satria toa manafintohina amin'ny alina izany. Izaho koa aza nahita safidy mangatsiaka mahatalanjona noho ny Fan Xpert 4 ary na ny mpankafy DC aza. Izy io dia misy lohateny PWM / DC voatokana izay afaka manakana ny fanamafisana ny rano. Mazava ho azy, na dia ao amin'ny efitrano maizimaizina na miaraka amin'ny kabinetra mangarahara aza, dia motherboard iray tadiavin'ny rehetra izany.
Ny traikefan'ny mpividy:
Hitan'ny mpividy fa tena sarobidy amin'ny vola ity vokatra mahavariana ity. Misy antony roa manokana hisafidianan'ny mpividy an'ity motherboard ity. Ny iray dia ny fahombiazan'ny fifaninanana omen'ity vokatra ity ary ny iray kosa dia ny fomba fijery cyber. Tsy ilaina intsony ny milaza azy, Asus ROG Strix B450-F Gaming Motherboard dia miakatra ambonin'izany rehetra izany amin'ny fihodinana am-paosy sy ny fampisehoana omeny.
Mety tsara indrindra ho an'ny:
Ity motherboard ity dia safidy mety indrindra ho an'ireo mpilalao matihanina izay te hanana fanavaozana ny processeur mahazatra sy ny motherboard-ny mpanohana azy ireo. Ity fitaovana manokana ity dia azo antoka fa hihoatra ny hafa.
Ny kalitaon'ny fananganana dia tena tsara ampiasaina
Toa tsara amin'ny kabinetra mangarahara izany
Ity vokatra ity dia miaraka amin'ny rindrambaiko voafantina mendrika
Azonao atao ny mahazo ny fanohanan'ny AMD store MI
Mahazo aina tokoa ny vidiny
Tsy misy modely wifi tafiditra amin'ity vokatra ity
Mety hiatrika fanaraha-maso BIOS kely ianao
2. Gigabyte X570 AORUS Motherboard Elite
Gigabyte X570 dia anarana tsara iray hafa ao amin'ny sehatry ny motherboard tsara indrindra ho an'ny processeur AMD Ryzen 5. Izy io dia miaraka amin'ny fanavaozana bios mora miaraka amin'ny fanampian'ny fampiasa Q-Flash plus. Na ianao dia tsy mila manangana ny CPU sy ny memoires satria ampy ny fametrahana rakitra bios. Misambotra mpanamory sary maro karazana izay mety hanatsara ny traikefa lalao.
Mba hanatsarana ny fiarovana sy ny fananganana vatana, ity vokatra ity dia miaraka amina ampinga I / O. Izy io dia milahatra amin'ny vatana vy mavesatra sy fitaovana fiarovana manodidina anao izay ahafahanao mahazo vatana mendrika. Vokatr'izany dia lasa mora kokoa amin'ny fampisehoana an'ity motherboard ity. Io dia ahafahanao mahazo fandidiana tsy misy tohika sy safidy fanamboarana haingana hiara-miasa.
Gigabyte X570 dia manasongadina fiheverana mahatalanjona amin'ny famolavolana angovo 12 +2. Feno mpifehy PWM dizitaly manodidina ny sisiny izay mamela anao hahazo singa mendrika. Ity maso nomerika ity dia natao hanomezana anao mazava tsara. Vokatr'izany dia ahafahanao mandefa herinaratra amin'ireo singa. Noho izany, ny valiny avy amin'ny X750 dia mahafinaritra.
Endri-javatra mahavariana iray hafa ihany koa ny fanohanan'ny DDR4 XMP. Ity fitaovana ity dia afaka mamaky mora foana amin'ny 4000 MHZ izay mahatonga azy io ho safidy lehibe. Mba hahatratrarana ny zava-bita, Gigabyte dia nanolotra tariby XM miaraka amin'ny vokariny. Io dia ahafahanao mahazo fampiroboroboana fampiroboroboana. Izy io dia tohanan'ny fitaovana M.2 SSD roa. Ny tsirairay amin'izy ireo dia miaraka amin'ny mpiambina mafana mba hitazomana ny fametrahana azy rehetra ho tsara.
Ny mpividy dia tia Gigabyte X570 AORUS Elite Motherboard noho ny fakan-tahaka fakan-tahaka izay afaka mamokatra mora foana. Ny ankamaroan'izy ireo dia nandany hevitra tamin'ny fisafidianana ity motherboard ity ho fanohanana x570. Tsotra satria miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana ary ny fampisehoana aparitak'ity fitaovana ity dia azo antoka fa tsy manam-paharoa.
Gigabyte dia nanolotra an'ity fitaovana ity amin'ny lalao mihaona ambony ary mety ho an'ny matihanina izany. Ity vokatra ity dia misy heatsink VRM izay manampy amin'ny fitazonana ireo singa ampidirina ao anaty hafanana. Misy seranana maromaro ihany koa amin'ny fametrahana tsiranoka anaty rano manodidina ny vatana.
Izy io dia miaraka amin'ny heatsink M.2 miaraka amin'ity vokatra ity
Misy ny ampinga I / O mifangaro
Ity vokatra ity dia manana dingana 12 an'ny VRM nomerika
Mba hahazoana fidirana mora dia tsindrio ny bokotra Q-Flash Plus
Main board dia misy mpampitohy herinaratra 24 Pin
Ny jiro RGB dia mety ho bebe kokoa
Tsy misy seranana Type-C
3. Asus Prime B450M-A Motherboard ara-barotra
Betsaka ny olona no mampiasa Asus Prime B450M-A ho toy ny motherboard matihanina ary marina ny momba an'io vokatra io. Mandritra ny fampifandraisana dia ho hitanao fa ity motherboard ity dia mifandray mora foana amin'ireo mpandahatra processeur Ryzen faha-3. Na izany aza, tsy maintsy havaozinao amin'ny tanana ny menio bios raha mila fanovana ianao.
Tonga amin'ny fifandraisana, ity fitaovana ity dia manana fikirakirana mahavariana. Azonao atao ny mampifandray mivantana ny LAN satria mahazaka fahan'ny 1GB. Mba hamelana configurations bebe kokoa dia nahita olona marobe nanamboatra azy tamin'ny D-sub aho ary koa ny fampisehoana DVI. Ny safidy manana fampiasa HDMI 2.0 dia mamela anao hampiseho ny Xbox na PS5 arak'izay ilainao ihany koa.
Ity vokatra ity dia manasongadina fampifangaroana ram DDR4 mahatalanjona ahafahanao mahazo tahiry fitadidy mora foana. Manana slot RAM enina hafa izy io. Azonao atao ny manefy tanana na manisy kapila RAM hatrany arak'izay ilainao. Ny chipset tohana dia maodely AMD B450 izay mendrika amin'ny toerana mangatsiaka.
Mba hampatanjaka ity motherboard ity dia mila batterie lithium-ion. Na dia tsy misy mpampifandray RGB aza izany dia azonao atao ihany ny mampiasa an'ity motherboard ity amin'ny kabinetra mangarahara. Mazava be ny lanjany ary noho izany, tsy ho antso mafy akory ny fametrahana.
Hitan'ny mpividy ity vokatra ity fa mahavariana eo amin'ny natiora. Izy io dia miaraka amin'ny fampisehoana mendrika izay tian'ny maro. Na izany aza, misy ny olona sasany, izay somary sosotra amin'ny valin'ny mpanjifa. Ny fanoloana an'ity motherboard ity dia mety maharitra tapa-bolana. Fa raha dinihinao ny teti-bola sy izay azonao amin'izany, ny fisafidianana ny Asus Prime B450M-A dia mety ho safidy mahavariana ho an'ny rehetra.
Ny motherboard ASUS amin'ny ankapobeny dia misy amin'ny vidiny mirary. Ny Asus Prime B450M-A Motherboard ara-barotra koa dia tonga miaraka amina vatana mendrika izay manana toerana ao anatiny. Na dia tsy ho ny tsara indrindra amin'ny rehetra aza, ireo fiasa sy fahombiazana omen'ity motherboard ity dia fitsaboana ho an'ny rehetra. Na iza na iza gamer amateur dia te-handamina ny motherboard amin'ny AMD Ryzen 5 3600.
Tena mandeha tsara amin'ny maodely AMD rehetra
Afaka mahazo fiarovana amin'ny mpiambina LAN ianao
Fanohanana lehibe avy amin'ny foibe fanaraha-maso ASUS
Izy io dia manana fanaraha-maso mendrika fiarovana / fiarovana fiarovana
Ity vokatra ity dia misy fiarovana DRAM overcurrent
Somary avo ny vidiny
Heatsink dia tsy tsara indrindra amin'ireo mpifaninana
4.ASRock B450M PRO4 AM4 Motherboard
ASRock B450M Motherboard dia misy fampisehoana matanjaka sy fonosana mendrika ihany koa. Voaro amin'ny lafiny rehetra izy amin'ny vy tokana ary ny kalitaon'ny ampingan'ny I / O dia tsara ihany koa. Misy marika misy seranana amin'ny seranana izay mamela ity vokatra ity hahagaga amin'ny natiora. Mampitaha ireo motherboard hafa rehetra avy amin'ny ASRock, Pro4 dia vokatra mahatalanjona azo isafidianana.
Tonga amin'ny audio, ity fitaovana ity dia miaraka amin'i Realtek ALC892. Ity no mpamily mahazatra ho an'ny ankamaroan'ny fitaovana enti-peo ary isaina amin'ny famoahana 3uA izy ireo. Mazava ho azy, azonao atao ny mahazo fifehezana tsotra amin'ny haavon'ny tabataba izay mamela anao hampiasa fantsona 7.1 ho an'ny filan'ny feo mahery. Tsy ilaina ny famoahana optika, fa afaka mahazo seranana HDMI ianao ho an'ny valiny mora.
Ny fametrahana bios ho an'ny ASRock B450M PRO4 AM4 Motherboard dia mendrika hampiasaina ary tonga amin'ny fidirana tanteraka amin'ny vokatra. Azonao atao ny miasa miaraka amin'ny zava-drehetra ao anatin'izany ny fanaraha-maso, ny safidy mandroso, ary koa ny toetr'andro tafahoatra. Hanampy anao izy ireo hahita sy hanitsy ny haavon'ny fifehezana. Tsy mila manavao biôma tanana akory ianao.
Nandritra ny fizahan-toetra ity vokatra ity dia hitako fa misy valiny ambany kokoa. Izaho manokana dia niandry manodidina ny 1V teo am-piasana. Na izany aza, miavaka tokoa ny valiny raha ny zava-bita no resahina. Toa nahatratra ny hafainganam-pandeha 4.2GHz ity vokatra ity ka nahatratra ny overclocking tamin'ny 1.43V. Tsy dia misy tabilao marobe no tonga ambony miaraka amin'ny fampisehoana miavaka toy izany.
Nahita mpividy maro liana tamin'ity vokatra ity aho. Ny ankamaroan'ny olona dia maniry an'ity vokatra ity ho toy ny motherboard mahafinaritra avy amin'ny ASRock. Noho ny fitahirizana M.2 sy ny fampisehoana mahatalanjona, dia toa safidy lehibe indrindra io. Ambonin'izany, ASRock B450M PRO4 AM4 Motherboard dia manolotra tsipika RGB manerana an'ity vatana ity. Vokatr'izany dia lasa safidy mendrika ho an'ny rehetra izy io.
Rehefa tonga ny lalao hifanaraka amin'ny zava-bita dia tsy misy zavatra mety ho tsara kokoa noho ny fampiasana ny Motherboard ASRock B450M PRO4 AM4. Manamora ny fahombiazana amin'ny alàlan'ny sary avo lenta sy ny fanohanan'ny processeur. Izay tia lalao matihanina rehetra dia maniry ny hanana ity fitaovana ity ho an'ny tranony.
Ity vokatra ity dia misy fiarovana haingana sy haingana
Izy io dia manana tadiny RGB manaova endrika hahasarika azy
Izy io dia miaraka amin'ny audio grade Gaming izay mavitrika amin'ny natiora
Ny vokatra dia misy valiny fitahirizana M.2 mendrika
Izy io dia manohana PCIEx16 mendrika ho an'ny karatra sary mahafinaritra
Ny fahafaha-mitahiry dia afaka manatsara kely
Ny fanamafisana ny rano dia azo hatsaraina
MSI dia nanangana marindrano kilalao marobe, ary azo antoka fa ity dia manokana amin'ny lafiny rehetra. MSI Mini-ITX dia misy suite rindrambaiko feno avy amin'ny mpanamboatra. Io dia ahafahanao manangana bios haingana ary mahafehy tanteraka ity tabilao ity. Tombony lehibe kokoa hatrany ny fananana rindrambaiko misy mpamily kely indrindra. Afaka mahazo fampahalalana feno momba ny asa ianao.
Ny on-board audio dia ahafahanao mahazo mekanika tsotra misy kalitaon'ny feo mihetsika. Izy io dia manana capacitor audio Japoney izay mahatonga ity fitaovana ity ho tsara ampiasaina. Ny ankamaroan'ny motherboard MSI dia manana an'io endri-javatra iraisana io satria ahafahanao manamboatra fitaovana audio any ivelany amin'ny lafiny roa amin'ny PCB. Manome fisarahana stereo madio kokoa izay afaka manatsara ny sehatra ambadika.
Ny fanohanana ny fahatsiarovana an'i Mini-ITX dia iray amin'ireo fiasa be mpiresaka indrindra amin'ity vokatra ity. Io dia ahafahanao mametraka slot DIMM roa izay afaka mampiditra habaka fitadidiana RAM 64 GB DDR4. Ankoatr'izany dia afaka mahazo fanohanana PCIe 3.0 × 16 iray ianao. Izany dia miteraka tombony fanampiny amin'ny vokatra izay manome anao safidy fitehirizana tsara kokoa. Tsy dia misy tabilao marobe no tonga miaraka amina fivoarana mandroso toy izany.
Ny endri-javatra toy ny fihenan'ny VRM sy ny overclocking dia mahatonga an'io vokatra io hahagaga ihany koa. Tsy dia be ny zorony manodidina, saingy azo antoka fa mametaka fanaingoana VRM 6 + 2 dingana. Azonao atao ny manantena ambiansy mangatsiaka manodidina ny CPU anao na dia miasa mandritra ny fotoana maharitra aza izy. Mba hanatsarana ny kalitao, ny MSI dia nanolotra dingana IR3555 PoweR izay misy indrindra amin'ny motherboard avo lenta.
Seho iray izay tian'ny ankamaroan'ny mpividy momba ity vokatra ity ny vatany miorina tsara sy mora vidy. Ny vidiny ampiasaina amin'ity vokatra ity dia mifaninana amin'ny natiora ary mamela ny MSI Performance Gaming Mini-ITX Motherboard hihoatra ny hafa. Izaho manokana dia nanandrana ity motherboard ity tao amin'ny solo-sain'ilay namako ary toa mandeha tsara izany rehefa milalao ny GTA Vice City.
Raha mila fitaovana hanome anao fanaraha-maso feno sy fametrahana haingana ianao, MSI Performance Gaming Mini-ITX Motherboard dia vokatra mety indrindra hisafidianana. Izy io dia miaraka amina sticker afisy marobe sy antena WiFi ho fanohanana premium. Tianao ny mampiasa ireo vokatra ireo amin'ny valiny mahazatra.
Ny fampangatsiahana sy ny fikirakirana VRM dia voaorina tsara
Izy io dia miaraka amin'ny fanohanana WiFi AC anatiny sy Bluetooth
Ity vokatra ity dia manana endrika chipset B450
Afaka mahazo setup sy fikirakirana tsotra ianao ao anatin'ny minitra vitsy
Fanohanana avy amin'ny foiben'ny baiko MSI no mendrika hampiasaina
Ny vidinyamin'ity motherboard ity dia somary avo
Tsy misy kaody postaly LD miaraka amin'ity vokatra ity
Asus AM4 dia natomboka tamin'ny voalohany ho maodely matihanina izaitsizy. Na dia somary avo kokoa aza ny vidin'ity motherboard ity, ny fiasa azonao amin'ity fitaovana ity dia mampidina azy ho iray amin'ireo maodely mifaninana indrindra. Raha mampiasa maodely Ryzen 3000 ianao dia tsy maintsy safidy lehibe ho anao io. Safidy WiFi sy Bluetooth nohatsaraina no nahatonga azy io ho vokatra mendrika hisafidianana ihany koa.
Ity fitaovana ity dia mateza be sy maharitra ampiasaina. Izy io dia tonga amin'ny vatana vy I / O iray izay voaaro amin'ny lafiny rehetra. Ireo singa ilaina rehetra amin'ny sehatra AMD dia misy fiasa vonona amin'ny lalao. Ny hany ilainao dia ny mametraka fotsiny an'ity vokatra ity dia hanomboka hiasa eo noho eo. Tonga amin'ny famaritana, ity vokatra ity dia manana singa miaramila kilasy manodidina ho an'ny vatana milamina.
Ny endrika famolavolana herin'ity vokatra mahavariana ity dia safidy lehibe ho an'ny rehetra. Izy io dia nandroso VRM tamin'ny alàlan'ny dingana 12 + 2. Azonao atao ny mampiasa an'io endri-javatra io raha atambatra amin'ireo mpamily MOSFET avo lenta sy ambany izay manampy anao hahazo ny zava-drehetra ao anaty fonosana tokana. Izy io koa dia mitondra ny fangatahana fikirakirana farany farany ho an'ny vokatra tsara indrindra. Ny fisian'ireo dingana an-tanan'ny Dr. Mo dia mamaritra ny fampiasana herinaratra ho tsara kokoa.
Tonga amin'ny fisian'ny VRM, Asus AM4 dia toa mangatsiaka be noho ny vokatra rehetra. Izy io dia miaraka amin'ny heatsink mavitrika izay natokana ho an'ny PCH ary koa VRM. Noho ireo fiasa ireo dia nanjary mora kokoa ny mampiasa ny fikirakirana fitaovana avo lenta rehetra rehefa milalao lalao ianao. Azonao atao ny miditra amin'ny cooler sy ny cooler.
Ny mpanjifa rehetra izay nividy Asus AM4 TUF Gaming X570 Motherboard dia raiki-pitia tamin'ity vokatra mahavariana ity. Izy io dia miaraka amina fikirakirana fikirakirana mendrika izay haingam-pandeha ihany koa. Famotsorana vaovao io ary noho izany, tsy mila miandry fanavaozana ihany koa ianao.
Asus AM4 TUF Gaming X570 Motherboard dia namboarina manokana ho an'ny filan'ny lalao avo lenta. Ny fepetra rehetra momba ity vokatra ity dia tsara ampiasaina ary natao ho an'ny fampisehoana haingana. Ny olana overclocking dia ahena ho ambaratonga ambany kokoa ihany koa.
Ny vidinyamin'ity motherboard ity dia mifaninana izaitsizy
Asus AM4 dia miaraka amin'ny fanohanan'ny bios UEFI
Izy io dia miaraka amin'ny fanohanana mavitrika amin'ny chipset
Afaka mahazo ny fanohanan'ny 2.5 Gb LAN ianao
Mifanaraka mora amin'ny CPU Ryzen 5 3000 izy io
Tsy misy seranan-tsambo natokana ho an'ny PCIex1
Tsy hahita slot USB 3.1 misy ianao
Inona ilay Ryzen 5 3600?
AMD Ryzen 5 3600 dia mpiorina enina enina amin'ny ankapobeny natolotry ny AMD. Saika ny olon-drehetra eo amin'ny tontolon'ny lalao no mahalala momba ity mpitrandraka ity noho ny famaritana avo lenta sy ny fahafaha-mavesatra azony entina. Raha miresaka mombamomba azy, ity vokatra mahavariana ity dia miaraka amin'ny singa 12-kofehy AM4. Fananganana Zen 2 manokana no ampiasaina amin'ny famokarana ity vokatra ity. Izay mpikirakira Ryzen misy fanavaozana toy izany dia hametraka fampisehoana mahatalanjona rehefa milalao ny lalao tianao indrindra ianao.
Ny motherboard AM4 dia efa manana ny lazany amin'ny fahombiazana mendrika, saingy ity fanodinana ity dia mitaky fampisehoana fanampiny. Izany no antony itadiavan'ireo mpilalao gamme motherboard mifanentana aminy izay handeha tsara amin'ity vokatra ity. Tonga amin'ny famaritana ara-teknika ny AMD Ryzen 5 3600, dia miorina amin'ny hafainganan'ny famantaranandro 3,6 GHz hatramin'ny 4.2GHz farafaharatsiny.
Satria manohana DDR4 RAM misy fantsona roa izy io, ny fampifangaroana azy amin'ny motherboard toy izany dia mety hanampy anao hahatratra vokatra tsara kokoa amin'ny fotoana rehetra. Ny mpampiasa dia tokony hiandrandra ny fividianana motherboard izay manana fahaiza-manao avo amin'ny lafiny GPU sy CPU. Amin'ny fanaovana an'io ihany dia hahatsapa fitakiana kilalao lehibe ianao.
Izy io koa dia miaraka amin'ny herin'ny Design 65W izay misy cooler stealth anatiny. Amin'ny teny tsotra, dia manondro fa hafanaina ity mpanodina ity.
Ryzen 5 3600 tsara kokoa noho i5?
Samy vozon'ny hatoka avokoa ny Ryzen 5 sy ny Core i5 rehefa mampitahako ny mason'izy ireo. Na izany aza, somary mialoha ny AMD raha ny amin'ny fampisehoana ary koa ny vidin'ny teti-bola. Mazava ho azy fa ny processeur avy amin'ny Intel dia apetraka amin'ny ambaratonga avo kokoa. Izany dia noho ny heatsink. Mazava ho azy, Ryzen 5 dia manana heatsink ambany, saingy ny i5 dia ambany kokoa noho ny mampitaha.
Raha ampitahanao amin'ny famaritana hafa toy ny fampisehoana, ny hafainganan'ny famantaranandro, ary ny famaritana dia hitovy izy io. Na dia mitovy aza ny fiasa ara-teknika ho azy roa, mahavariana ny zava-bitan'ny Ryzen 5 ary somary mialoha ny hafa izany! Ny fandaniana herinaratra an'ny Intel dia somary ambany kokoa. Saingy tsy misy fiatraikany amin'ny zava-bita mihitsy.
Fa maninona no malaza be i Ryzen 5 3600?
Ryzen 5 dia manana mpifaninana mivantana amin'ny Intel core i5 na modely farany ambany avy amin'ny AMD koa. Efa nandalo ny vidin'ny vidiny ianao ary toa tsy misy dikany io Ryzen 5 io.
Mba ho ara-drariny, dia miaraka amin'ireo fiasa manokana rehetra izay hoentin'ireo mpanamory ambony. Noho izany dia mila motherboard mifanentana amin'izany ianao. Ny fampiasana ny motherboard taloha amin'ny Ryzen 5 dia tsy hahomby raha tsy misy ny fametrahana bios. Azo alaina amin'ny fivarotana an-tserasera izy io ary mifanentana be ny vidiny.
Mila manavao ny BIOS ho an'ny Ryzen 5 ve aho?
Ny fanavaozana ny rafitra rehetra dia mila fanavaozana ny mpamily. Ka raha tsy misafidy fanavaozana bios ianao dia tsy hanohana ireo mpamily fitaovana. Ny fanavaozana kely ny sary dia mety ho takatra. Ny fanovana azo antoka ny motherboard iray manontolo dia hitaky anao hanatsara tanteraka ny fametrahana bios. Na dia efa nanandrana an'ity aza aho ary ny motherboard sasany toa ny Gigabyte X570 dia hanao an'ity asa ity ho azy.
Firy ny lohan'ny mpankafy ilaiko amin'ny Ryzen 5?
Ankehitriny izany dia hiankina amin'ny karazana asa izay hataonao. Ohatra, andao hieritreritra fa nividy ity processeur ity ianao amin'ny lalao avo lenta. Na dia manana safidy mety amin'ny heat heater aza ny motherboard mifanentana, dia mafana be indraindray ny processeur AMD. Ny lohan-doha mpankafy 5 dia mety tsara ho azonao ampiasaina. Ny mpampitohy paompin-drivotra ho an'ny fampangatsiahana rano dia mety ho safidy mety ihany koa.
Hihazakazaka Fortnite amin'ny karatra sary an-tsambo ve izy io?
Mba ho ara-drariny, tsy misy hevitra toy izany momba ny karatra sary an-tsambo misy amin'ity vokatra ity. Rehefa vonona ny hilalao Fortnite ianao dia mila mahazo antoka fa feno ny fepetra takiana amin'ny fitaovana. Raha hilalao Fortnite dia tsy maintsy manana farafaharatsiny AMD Radeon HD 7870 na GeForce GTX 660 na modely nohavaozina. Azo antoka fa, mitadidy ireo ao an-tsaina, dia tsy maintsy ho azonao antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra.
Ahoana no fanavaozana ny BIOS Ryzen 5 3600?
Misy fombafomba samihafa azonao arahana raha tianao ny manavao ny menio bios anao. Ny motherboard sasany toa an'i Gigabyte dia manome menio q-flash mamela anao hisintona an'ity rakitra ity fotsiny ary ny fitsaharana dia eo amin'ny solosainao hametraka fanavaozana isaky ny misy izany. Na izany aza, raha vonona ny hanao fanavaozana amin'ny tanana ianao, dia azonao atao ny misintona biôsy amin'ny flash drive ary apetaho izany.
3600 ve ny fihoaram-pefy tafahoatra?
Hiankina amin'izay singa ampiasain'ny motherboard anao izany. Raha miaraka amin'i Ryzen 3600 fotsiny izy io dia tsy hamono be loatra ny processeur. Fa raha misy fanavaozana samihafa amin'ny fitaovana toy ny gpu na RAM be dia be dia be ny fihoaram-pefy. Raha ny tokony ho izy, raha misy ny tsy fahampiana amin'ireo singa finday hafa dia hanjavona indraindray ity motherboard ity.
Mila karatra sary ve i Ryzen 5 3600?
Ity iray ity indray dia miankina amin'ny karazana asa hataonao amin'ny solosainao. Mba ho ara-drariny, ity vokatra ity dia tsy miaraka amina karazana sary namboarina na natsofoka. Ny fivoahan'ny sary azonao dia kely dia kely ary mitaky anao hanisy iray foana izy io. Miankina amin'ny karazana asa ataonao toy ny filalaovana lalao HD na horonantsary avoakan'ny sary avo lenta, mety mila mametraka gpu amin'ity motherboard ity ianao.
Mety amin'ny filalaovana lalao ve ny misafidy Ryzen 5?
Mazava ho azy fa. Tsy dia misy fahasahiranana firy amin'ny fisafidianana Ryzen 5 ary tokony mifanaraka amin'ny zavatra antenainao izany. Raha dinihina ny Ryzen 5, dia manana hafainganana famantaranandro mahavariana. Ka ny traikefa an-tsehatra amin'ity lalao ity dia voatery handeha tsara. Mandritra izany fotoana izany dia miavaka ny anaram-boninahitra AAA hampiasa azy ireo hanohitra ity motherboard ity. Hanampy anao haka sary tsara isaky ny angon-drakitra.
Ny fisafidianana ny AMD Ryzen 5 3600 dia mety ho safidy mety indrindra ho an'ireo olona vonona hilalao lalao toa ny Fortnite na koa fiantsoana ny Adidy: Ady maoderina. Ny famaritana ilaina amin'ny filalaovana lalao toy izany dia ho avo kokoa.
Noho izany, ny fisafidianana andiana fitaovana mifanaraka aminy toa ny GPU, RAM na ny motherboard mendrika aza dia zava-dehibe. Rindrambaiko mifanentana dia mamela an'ity processeur ity hijanona ho cool na dia mamoaka hafanana lehibe kokoa aza.
Raha tsy tianao fotsiny ny hianjeran'ilay mpikirakira anao rehefa milalao ny lalao tianao indrindra, dia fidio izay iray eto amin'ity lisitr'ireo kaomandy tsara indrindra ho an'ny AMD Ryzen 5. Ampahafantaro anay anay hoe iza amin'ireo no tianao indrindra sy inona ny fampisehoana ao aminy.
Toerana mozika tsy voasakana 2020 - Henoy ny mozika na aiza na aiza
Tranonkala 10 tsara indrindra handefasana sarimihetsika
sarimihetsika maimaim-poana sy andian-tserasera
mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra maimaim-poana sy sarimihetsika an-tserasera tsy misintona
chromecast com fanamboarana windows phone
Windows ho mp3 mpanova windows
dia hbo Max mitovy amin'ny hbo izao